Ihe Ntuziaka Site na Ngwá Ọkụ Iji Na-achị Ndị Agbata Obi na Google Local Search Rankings
Google amalitelarịrị algọridim dị mgbagwoju anya iji dozie nsonaazụ, gaa na agbata obi nke onye na-arụpụta ajụjụ ahụ. Ọganihu nwere uru maka ma ndị ọrụ ma azụmahịa. Nke mbụ, Google na-ejikọta onye nyocha ọ bụla na ụlọ ọrụ dị na mpaghara. Nke abụọ, ndị na-azụ ahịa na-enweta ọganihu dị ukwuu ọbụna na obere ego. Ihe a na-arụpụta na-abụghị nke zuru oke, ụlọ ọrụ ga-etinyekwa mgbalị ụfọdụ tupu ha enweta visibiliti.
Igor Gamanenko, Onye Nlekọta Ihe Nlekọta Ndị Ahịa nke Semalt , na-ekere òkè ebe a na-enye aka na nke a - teleprompter app for android.
Google My Business bụ azụmahịa dị mfe search engine nke na-eme ka ọhụụ ọchụchọ dị mma. Jide n'aka na ozi niile dị mkpa maka azụmahịa ahụ dị ma jupụta oke dị ka o kwere mee. Nakwa, gunyere ihe ngosi dị ka ihe oyiyi ma ọ bụ vidiyo.
Na-agba ọsọ na ndepụta
Na mgbakwunye na nyochaa profaịlụ dị n'ịntanetị, enwere ihe ndị ọzọ dị mkpa na onye ọ bụla kwesịrị ịtụle tupu ya echegbu onwe ya banyere Google My Business ga-enyere aka na ọkwa.
Wụlite ebe nrụọrụ weebụ. Ọ dịghị mkpa, ma ọ nwere ike inye aka tinyekwuo ikike, ma dozie n'ụzọ kwesịrị ekwesị na mpaghara ụfọdụ.
The Schema.org Usoro mpaghara ga-eme ka ọ bụrụ onye nduzi banyere otú weebụ si egosi na engines ọchụchọ ya na ọnọdụ ya. Ọzọkwa, gunye faịlụ KML.
Profaili profaịlụ..Jụọ onye mgbasa ozi mgbasa ozi nke nhọrọ ọ bụla ma jide n'aka na imelite ya mgbe niile.
Imechi. Jide n'aka na adreesị na ozi dị banyere ahịa ahụ na-agbanwe agbanwe n'ozuzu nile nke kpọrọ aha ahụ.
Nsogbu Nsogbu Ndị Agbata Obi
Otu nsogbu na nsonaazụ ọchụchọ maka agbata bụ ụzọ Google si enyocha ya. O nwere ike ịnyeghachi ihe si na azụmahịa n'èzí ókè ma ọ bụ hapụ ụfọdụ n'ime n'ime ebe a kapịrị ọnụ. Nsogbu a sitere na ntụgharị uche na nke onwe nke akọwapụtara maka ókèala. Ihe odide ndị na-ekwekọghị na kọntaktị obodo na-agbakwụnye na nsogbu ahụ.
Google nọgidere na-eme mgbalị iji jide n'aka na ọ ga-eme ka nghọta ya mara ókèala. Ma ruo mgbe ha, ebe ndị dị n'ime agbata obi ezughị iji kwenye na ọdịdị dị na nsonaazụ ọchụchọ
Ihe ndị a bụ ụfọdụ usoro nyochacha mpaghara nke ga - enyere aka n'ịhụ na azụmahịa ahụ na - apụta na njedebe agbata obi-nsonaazụ ọchụchọ:
Enwere nhọrọ nhọrọ na-esote aha ụlọ ọrụ ahụ ebe onye nwe ya nwere ike itinye aha obodo ahụ.
Jiri mgbanwe nke aha agbata obi dị ka a maara ya.
Gụnye aha agbata obi na nchịkọta nkọwa nke Google My Business
Jide n'aka na mkpado aha niile na weebụsaịtị gụnyere aha agbata obi.
Mepụta ihe raara onwe ya nye na weebụsaịtị ebe aha.
Gaa Google MapMaker ka ị hụ nkọwa nke ala dịka Google na - ewere.
E nwere onye na - aga n'ihu na onye nwe ụlọ ahịa kwesịrị ịnọgide na - enwe ma ọ bụrụ na ha ga - arụ ọrụ ma ọ bụ melite mgbalị search engine .
Gbaa ndị ahịa ume ka ha bipute nyocha dị mma banyere azụmahịa. Nyocha ndị dị na Google My Page nwere ikike karịa akwụkwọ ibe ndị ọzọ.
Jiri nchọta nchọta ebe dịka WhiteSpark ịchọta ụzọ kachasị mma iji zite ebe dị ugbu a. Mgbe ịde blọgụ ọbịa, jide n'aka na ị gụnyere aha agbata obi na profaịlụ citation.
Mepụta blog ma mee ọtụtụ onyinye na mgbasa ozi ọha na eze site na idobe ọdịnaya dị na ndị na-ege ntị na mpaghara.
Na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ nọọrọ onwe ha, nwere ọganihu na mpaghara. Dabere na mmefu ego na ihe onwunwe, ụlọ ọrụ ga - abụ nhọrọ kachasị mma.